အမြင့်အဆုံးသတ္တု detectors အ (MS-6350) China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:သတ္တု Detector Minelab,သတ္တုရှာဖွေရေး Tools များ,ရွှေရှာဖွေရေးပစ္စည်းကိရိယာ
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြေအောက်သတ္တု Detector > မြေအောက်ရွှေ Detector > အမြင့်အဆုံးသတ္တု detectors အ (MS-6350)
အမြင့်အဆုံးသတ္တု detectors အ (MS-6350)
အဆိုပါ MD-6350 သီးသန့်ပစ်မှတ် ID ကိုနည်းပညာနှင့်မူပိုင်ခွင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု features တွေပါဝင်သည်။ ဒီနည်းပညာကိုသင် detector`s ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆက်တင် (အောက်ပိုင်းစကေး) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကိုတွေ့ရှိပစ်မှတ် (အထက်စကေး) ၏ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုနှစ်ခုညွှန်ပြချက်အကြေးခွံပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါ MD-6350 ကိုလည်း Enhanced သံဆုံးဖြတ်ချက် (ရှုပ်ပွနေအောင်ဒေသများရှိသံ junk ကနေနှစ်လိုဖွယ်ပစ်မှတ်ခွဲထုတ်ဘို့အပိုဆောင်း resolution ကို) တပ်ဆင်ထားနှင့်တစ်ဦးစံ 8.5 ကပိုစိန်ခေါ်မှု mineral မြေဆီလွှာထဲတွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အင်ဂျင်နီယာဘဲဥပုံကို Double-D ကိုရှာဖွေရေးကွိုင် "11 ×" ။ သတ္တု detector minelab
ယင်း၏ရေစိုခံရှာဖွေရေးကွိုင်သငျသညျရေ၌သတ္တုရှာဖွေကြကုန်အံ့နိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့သငျသညျရှေးခယျြဖို့အတှကျအရောင်အဝါရောင်နှင့်အစိမ်းပေးထားပါတယ်။ tools တွေဖော်ထုတ်မယ်သတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ မြေအောက်သတ္တု detector စကင်နာ, နက်ရှိုင်းသောမြေအောက်သတ္တု detector, မြေအောက်ရွှေ Detector ။
မြေအောက်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံသတ္တုတ္ထုဖော်ထုတ်မယ်။ ကျယ်ပြန့်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှု, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဏ္ဍာကိုအမဲလိုက်, ပစ္စည်းစသည်တို့ကိုစစ်ဆေး .. mini ကိုသတ္တု detector, နက်ရှိုင်းရှာဖွေရေးမြေအောက်ကိုရွှေ detector, မြေအောက်ကိုရွှေ detector, ရွှေသတ္တု Detector အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
3. ပစ်မှတ် ID ကို cursor (အထက်စကေး) ရတာဟာပစ်မှတ် ID ကို cursor သည်ပစ်မှတ် ID ကိုဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများနှင့် တွဲဖက်. တစ်ဦးရှာဖွေတွေ့ရှိပစ်မှတ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဝိသေသလက္ခဏာဖော်ပြသည်။ အထက်စကေးပစ်မှတ် ID အတှကျတဆယ်နှစ်လုံးကို (12) ဂရပ်ဖစ် segments များပါဝင်ပါသည်။ ကိုရွှေဖော်ထုတ်မယ်ကိရိယာများ
7. ထိခိုက်လွယ်မှုအညွှန်းကိန်း-အဆိုပါ MD-6350 sensitivity ကိုများအတွက်ရှစ် (8) setting များကိုရှိပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့အဆုံးသတ္တု detectors အ
သတ္တု Detector Minelab သတ္တုရှာဖွေရေး Tools များ ရွှေရှာဖွေရေးပစ္စည်းကိရိယာ သတ္တု Detector coil သတ္တု Detector Bag သတ္တု Detector Italia သတ္တု Detector NZ သတ္တု Detector Radar